ko htike's prosaic collection: ယတြာမအောင်မြင်တဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ဒုက္ခ
အာဏာကို လက်လွှက်ရမှာ သေမလောက် ကြောက်နေပြီး လောဘ ရမက်ကြီးလှတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကြီး သန်းရွှေ တယောက် ယတြာချေတာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အကုသိုလ် အကျိုးပေးကတော့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေပါတယ်။အများသိရှိထားခဲ့ကြသလို ဇလွန်မှာ ယတြာချေဘို့ လုပ်စဉ် သက်တော်စောင့် ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးရှိန်ပေးတဲ့ မီးချစ်က မီးမတောက်တာကြောင့်၊ ဘုရားဂေါပကများ စီစဉ်ထားတဲ့ မီးချစ်ကို အာဏာရှင်ကြီးသန်းရွှေထံ လှမ်းပေးစဉ် လက်ထဲမရောက်ဘဲ အောက်သို့ ပြုတ်ကျသွားတာကြောင့် အာဏာရှင်ကြီး အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ရပါတယ်။အသိဥာဏ်နဲ့ ဆင်ချင်တုံတရား ကင်းမဲ့လှတဲ့ အာဏာရှင်ရဲ့ တချက်လွှတ်အမိန့်ကြောင့် မယက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရင်ထွန်းကို ညတွင်းချင်း အလုပ်ဖြုတ်ပြစ်ခဲ့ပြီး တာဝန်ရှိ ဦးစီးအရာရှိတဦးကို တံတားဦးမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ချောက်ထဲတွန်းချဘို့ ခိုင်မာတဲ့ဦးတည်ချက် တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေနဲ့ နေ့မနား၊ ညမအား ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့် ခါးနာဝေဒနာ ခံစားနေရပေမဲ့ ရည်မှန်းချက် မပြည့်ဝမှာ စိုးရိမ်မိတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ချောက်ထဲ တွန်းချနိုင်ရန် ဗေဒင်ဆရာရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အပြေးအလွှား ယတြာချေနေရတာပါ။ခါးနာရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလာလို့ ငွေဆောင် ပင်လယ်ကမ်းခြေ ခရီးစဉ်ကတဆင့် ရန်ကုန်မှာ ခေတ္တနားပြီး နေပြည်တော် အပြန်မှာ ဇလွန်ယတြာမအောင်မြင်တာကို အမြန် အစားထိုး ဆောင်ရွက်ရန် ဗေဒင်ဆရာက ထပ်မှန်ညွှန် ကြားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီတခါမှာတော့ နေပြည်တော်မှာ စစ်အုပ်စုက တည်ထားကိုးကွယ်မဲ့ ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော် (တည်ဆောက်ဆဲ) မှာ ယတြာချေခိုင်းတာပါ။ စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဘုရားရှိခိုးပြီး ယတြာချေဘို့အထမှာ ရပ်ပြီးပြီးခြင်း ဖင်ထိုင်လျှက် ပြုတ်ကျသွားတာကြောင့် အရေးပေါ် လူနာတင်ကားနဲ့ ခုတင်(၁၀၀၀) စစ်ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်လိုက်ရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကြီးကို သယ်ဆောင်သွားတဲ့ MSF မှ လှူဒန်းထားတဲ့ ခေတ်မှီ လူနာတင်ယာဉ်ဟာ လေအေးပေးစက် ချို့ယွင်းနေလို့ တာဝန်ရှိအရာရှိဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးထက်ဟာ ဆူပူကြိမ်းမောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကကဆေး မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်သန်းအောင်ရဲ့ တပည့်ရင်းဖြစ်တာကြောင့် အကြီးအကြယ် အရေးယူမှု မရှိခဲ့တာပါ။ခုတင်(၁၀၀၀)စစ်ဆေးရုံမှာ ရက်အတန်ကြာ ကုသမှုခံယူပြီး ယခုအခါ စစ်အာဏာရှင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ ဆေးကုသမှုဆက်လက်ခံယူနေပါတယ်။ မည်သည့် နိုင်ငံရပ်ခြားဧည့်သည်ကိုမျှလက်ခံမတွေ့ပါ။(မှတ်ချက်။ သတင်းပေးပို့သော တပ်မတော်အရာရှိ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား မဖေါ်ပြခြင်းအပေါ် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။)ယတြာအပေါ်မှာသာ ဖက်တွယ်အားထားနေရှာတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ ဘဝဇတ်သိမ်းမကောင်းပုံကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။
ွှToday is his 75th Birthday.Makeawish to him.
2 February 2009 11:19
75! Here are my birthday wishes for him.May he be sick and suffer till die.May he vomit inside out till die.May he and his family be sick together.May all of his supporters be sick like him and go to hell together with him.
2 February 2009 12:23
2day is Gen Than Shwe's 75? I will pray to Buddha that Than Shwe getsaheart attack and die.
2 February 2009 17:35
LORD BUDDHA will give Than Shwe back what he have given to Buddhist Monks last Sept 2007.
2 February 2009 23:04
He is going to reap what he has been sowing. What goes around comes around, Than Shwe.
3 February 2009 04:58
မသာကြီး သေချင်းဆိုးကြီး ကာလနာကြီးမချိမဆန့် ခံရပြီးမှ သေပါစေဗျာ.....
3 February 2009 09:18
Happy Birthday!My lovely Senior General Than Shwe.Wish you good health!May you be happy!The best of luck!May you live long!May God bless you!:D
3 February 2009 19:03
Actually Than Shwe is 77 today. His birth day was reduced by2years for the sake of Ya-da-yar on his health , again.There isabelief (in astrology) that ifaperson's age is divisible by 11 , such as 44, 66, 77, 88....that person health is ESPECIALLY risky, sometimes, life threatening..
3 February 2009 20:54
3 February 2009 22:11
Hey Mr. Soldier, if you love Than Shwe so much, go give himablow job.
3 February 2009 23:51
BoGyote Kway Gyi Than Shwe
3 February 2009 23:56
ပိုက်ဆံဆိုသောအရာသည် သက်မဲ့တစ်ခုဖြစ်သည် သက်ရှိတောင် မမြဲခြင်းနဲ့ပျက်စီးနေ၏ ထိုသို့သောဟောင်းနွမ်းပျက်စီးတာ အထူးဆန်းလား..Mr SOLDIERThen why are you and your father Than Shwe trying to hold to the power so hard even killing the monks. Eating the Thar Ma Nya sayadaw body. (monks cristal) One day you and your fatherThan Shwe will be သက်ရှိတောင် မမြဲခြင်းနဲ့ပျက်စီးနေ၏. But different is before you monks killer die you will visit to the hell forashort time before you die so you can tell the people there is the hell really exit.Please come write to the Blog in the comment for what you seem.
4 February 2009 16:33
Giglo Kyaw Myint
I wanna see his ending soon......
5 February 2009 02:51
မောင်လှကျွန်တော် ပြောတဲ့အထဲမှာ ဘုရားသားတော်တွေကို သတ်တယ် သတ်မယ်ဆိုတာမပါဘူး ..ငွေစက္ကူအကြောင်းကိုပဲ အခြားဘလော့မှာ ရေးတာပဲရှိတယ်...Eating the Thar Ma Nya sayadaw body.ဘယ်သူပြောလဲ အဲဒီလိုပဲ ယုံလိုက်သလား သူများပြောတာကို..Human begings and animals have intelligence,but only humans have intellect.But you don't have intellectual.How old are you ?:D.
It'sagreat news.I am happy to hear that.His last days will be worse thanadog's.He can lie the world but not himself and god.The yatayar won't work cos the bad deeds he did are more than the good deeds.He cannot escape from the hell.The hell is waiting for him for life sentence .
5 February 2009 22:58
"မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား ဘုရားတပြည့်တော်၏ရုပ်နာနမ်နှစ်ပါးခန္ဒာငါးပါးအားပေးလှူပါ၏အရှင် ဘုရား၊ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်"SOLDIER" ဆိုသည့် သာသနာဖျက်အားပေး၊အဝေဇိကပ်၊နောက်ဘ၀ ငရဲ၊အခုဘ၀သရဲ၊ကြားဘ၀ပြိတ္တာ၊ဘုန်းကြီးလို့အသက်မရှည် အသက်ရှည်လို့ဘုန်းမကြီး၊သားမွေးလဲအခြောက်ဖြစ်၊သမ္မီးမွေးlesbo ဖြစ်၊မိန်းမကြာခို အသင်သာသနာဖျက်အားပေး ကျွှပ်တို့၏ကျိန်စာများ အသင်မမေ့ ပါစေသား။
မောင်မောင်ဟဟဟာသပဲ မောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်...တုနှိုင်းလို့မရတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို မင်းကဒီမှာလာပြီးတော့ သစ္စာဆိုပြနေတာလား.. ဘုရားကို မရိုသေတာလား...ဒီနေရာမှာ မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ စကားလုံးတောင် မသုံးသင့်တဲ့ နေရာပါ...မင်းက မြတ်စွာဘုရားကို သစ္စာဆိုပြနေတာလား ဘလော့မှာရှိတဲ့ လူတွေကို သစ္စာဆိုပြနေတာလား...မင်းက စကားအဖြစ် မြတ်စွာဘုရားကို လှူရအောင် မင်းတကယ်ရော မြတ်စွာဘုရားကို မင်းရဲ့ခန္ဒာကိုယ်လှူခဲ့လား...ခန္ဒာကိုယ်မပြောသေးနဲ့အုံးမင်းရဲ့လူ့ဘ၀တစ်သက်တာမှာဘာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှု့လုပ်ခဲ့ပြီလဲ ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစား..အားတိုင်းဖင်ယားတိုင်း အွန်လိုင်းမှာပဲ သူရဲကောင်းလုပ်နေရင်တော့ မင်း မြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်တည်တာတွေက မင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့ အပြစ်ပေးခံရလိမ့်မယ်...မင်းကအဲဒီလိုသူများကို မကောင်းကြံတဲ့ စိတ်မွေးလိုက်တဲ့အတွက် မင်းမှာ အပြစ်ရှိသွားပြီဆိုတာရောသိလား...မြတ်စွာဘုရားကျမ်းသစ္စာဆိုတာ သူများကို ပုတ်ခတ်ထိခိုက်ဖို့ သစ္စာတွေဆိုခဲ့တာမဟုတ်ဘူး..သူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေ သူကျင့်ခဲ့တဲတရားတွေနဲ့ပဲ သူ့ရပ်လုပ်ရပ်ဟာမှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်သားကိုအကျိုးရှိအောင်ကိုပဲ သစ္စာပြုခဲ့တာ..မင်းရဲ့သစ္စာ စကားဟာ သူများကိုမကောင်းကြံနဲ့ ဆိုတဲ့အတွက် မင်းခန္ဒာကိုယ်ကြီးပေးဆပ်လည်း မင်းအတွက်အကျိုးတော့ထူးလာမှာမဟုတ်ဘူး..မင်းပဲ မင်းရဲ့သစ္စာစကားက ပြန်ပြီးထိလိမ့်မယ်...မင်းကငါ့နာမည်ကိုတွေ့နာနဲ့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ရမ်းသမ်းအော်နေ သစ္စာတွေဆိုပြနေတာ အံ့ပါရဲ့ကွာ..ငါဘာတွေရေးခဲ့တယ် ဆိုတာရောသေချာဖတ်လား...ငါရေးခဲ့တဲ့ အထဲမှာ မင်းတို့လို ရိုင်းစိုင်းတာ တစ်လုံးမှမပါဘူး..သာသနာကိုစော်ကားထားတာလည်း တစ်ခုမှမပါဘူး..ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်း သတ်လို့လည်းမပြောထားဘူး..မင်းတို့သာ စစ်သားဆိုတာနဲ့ မျက်စိမှိတ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆဲရရင်ပြီးရောဆိုပြီး ဆဲနေတာ...ဘလော့တကာဆဲနေတာလည်းမင်းတို့ပဲ..မိန်းကလေးတွေမကြည့်ဝံ့တဲ့ ဘလော့ဆိုလည်း မင်းတို့ပဲ...သတင်းဖြစ်ရင် ပြီးရော ဆိုပြီးရေးတော့လည်း မင်းတို့ပဲ...သူများစာတွေကို ကော်ပီလုပ်ပြီး ကြောငြာနေတာလည်း မင်းတို့ပဲ..သာမန်ရုိးသားစွာရေးနေတဲ့ မိန်းကလေးဘလော့တွေရဲ့ စီဘောက်တွေမှာ မဖတ်သင့်တဲ့စာတွေရေးနေတာလည်းမင်းတို့ပဲ..ဘလော့လောကမှာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပြသာနာတတ်တာလည်း မင်းတို့ပဲ...သူများဝက်ဆိုဒ်နစ်ကိုယူပြီး မကောင်းကြံကြောငြာတာလည်း မင်းတို့ပဲ..ဝေလားဝါးလား လုပ်တတ်တာလည်း မင်းတို့ပဲ..လေလှိုင်းထဲမှာ ကမ္ဘာပျက်အောင်လုပ်နေတာလည်း မင်းတို့ပဲ...မင်းတို့ ကောင်းတာဘာရှိလဲ..ပြောစမ်းပါဦး..မင်းတို့ရဲ့မှုဝါဒကစစ်သားမှန်ရင် ဆဲရမည်...စစ်သားမှန်ရင်အဆိုးမြင်ဝါဒီနဲ့ကြည့်ရမည်..မင်းတို့ သိတာဒါပဲသိတယ်...ဒီလိုလူမျိုးတစ်ယောက်က မြတ်စွာဘုရားကို ဒီလိုအခြေမြစ်မရှိတဲ့ဘလော့နေရာမှာလာပြီးတိုင်တည်နေတာဘုရားကို မရိုသေတာကြသလို မိမိကိုယ်ကိုမရှက်ကြောင်း ၀န်ခံခြင်းဖြစ်တယ်
7 February 2009 20:44
To Mr Solider,It is good that you are defending from military side. But you can't blame people who hate soliders of Burma because they might have experience of by seeing or hearing the news like buddhist monks being killed, beaten, jailed, monastery are destroyed. And women are being raped and children are being killed and forced to join to army. Tell me what your soliders do good for the country? Tell me why General Aung San, our independent hero, is being neglect by his own army? If your intention is to be rich and powerful like Than Shwe, you are going the wroung way and it is not worth to defend evils to get promotion for you. Think about it and beagood solider.
10 February 2009 12:06
Hello!Thanks for letting know the truth to the public!I would be very greatful if you send every update news to me if possible. Thanks,again.Sincerely,May Thingyan
26 February 2009 06:05
10 March 2009 07:21
成人電影,情色,本土自拍, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友, 本土自拍, 美女交友, 嘟嘟成人網, 成人貼圖, 成人電影, A片, 豆豆聊天室, 聊天室, UT聊天室, 尋夢園聊天室, 男同志聊天室, UT男同志聊天室, 聊天室尋夢園, 080聊天室, 080苗栗人聊天室, 6K聊天室, 女同志聊天室, 小高聊天室, 情色論壇, 色情網站, 成人網站, 成人論壇, 免費A片, 上班族聊天室, 成人聊天室, 成人小說, 微風成人區, 色美媚部落格, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人論壇, 情色聊天室, 寄情築園小遊戲, AV女優,成人電影,情色,本土自拍, A片下載, 日本A片, 麗的色遊戲, 色色網, ,嘟嘟情人色網, 色情網站, 成人網站, 正妹牆, 正妹百人斬, aio,伊莉, 伊莉討論區, 成人遊戲, 成人影城, ut聊天室, 免費A片, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, aV, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片,成人電影,情色,本土自拍,
26 March 2009 02:43
4 April 2009 18:16
免費A片, 本土自拍, AV女優, 美女視訊, 情色交友, 免費AV, 色情網站, 辣妹視訊, 美女交友, 色情影片, 成人影片, 成人網站, A片,H漫, 18成人, 成人圖片, 成人漫畫, 情色網, 日本A片, 免費A片下載, 性愛, 成人交友, 嘟嘟成人網, 成人電影, 成人, 成人貼圖, 成人小說, 成人文章, 成人圖片區, 免費成人影片, 成人遊戲, 微風成人, 愛情公寓, 情色, 情色貼圖, 情色文學, 做愛, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 寄情築園小遊戲, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 言情小說, 愛情小說, 色情A片, 情色論壇, 色情影片, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊美女, 視訊交友, ut聊天室, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, a片下載, av片, A漫, av dvd, av成人網, 聊天室, 成人論壇, 本土自拍, 自拍, A片, 愛情公寓, 情色, 舊情人, 情色貼圖, 情色文學, 情色交友, 色情聊天室, 色情小說, 一葉情貼圖片區, 情色小說, 色情, 色情遊戲, 情色視訊, 情色電影, aio交友愛情館, 色情a片, 一夜情, 辣妹視訊, 視訊聊天室, 免費視訊聊天, 免費視訊, 視訊, 視訊美女, 美女視訊, 視訊交友, 視訊聊天, 免費視訊聊天室, 情人視訊網, 影音視訊聊天室, 視訊交友90739, 成人影片, 成人交友,
13 April 2009 13:20
13 April 2009 14:55
အာဏာရှင် နအဖ၏ လမ်းပြမြေပုံအရ လုပ်မည်ဖြစ်သော ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် Should we say "Yes" toaconstitution that has written by this situation?
“ရန်...ငါ မပြတ်လို့သံဃာ အသတ်ခံရတာသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းမရှိ....”(အောင်ဝေး)
အသေးစိပ် အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။(Update at 13.Dec.2007 GMT 22:30)
burmese bloggers w/o borders ...................
အမျိုးသား ညီလာခံ ၁၀၄ ချက်
ပြည်တွင်း ပြည်ပ မြန်မာလူငယ်များ